> Resource > Windows > Sidee si ay u gudbiyaan iPad Camera Roll in PC
Waxaan kuma wareejin karaan sawiro laga qaadin on my iPad 2 iyo kaydiyaa Roll Camera in aan PC. Waxay u eg tahay in gabi ahaanba la iska indho tiray markii howlan. Fikrado kasta fadlan?
Taasi waa run. Sida tababare hal dhinac ah, Lugood ma kaa caawin karaan inaad ku wareejiso Roll Camera si aad u computer. Sidaas darteed, haddii aad go'aansato in aad wareejiso Roll Camera on iPad si aad u computer ah ee gurmad, inaad si fiican u isticmaali lahaa qalab kale oo dhinac saddexaad.
Halkan waa mid ka mid ah kugu habboon. Waa Wondershare TunesGo (dadka isticmaala Windows) ama Wondershare TunesGo (Mac) . Labada nooc oo iPad si kala iibsiga computer awood aad si ay u gudbiyaan iPad Camera Roll in computer si ka fudud. Ka dib markii ay u dhoofiyaan, in aad sidoo kale karaa kala iibsiga ku giringiriya Camera in album ah ama tirtirto aad iPad Camera Roll oo bilaash ah ilaa meel.
Sida loo sawiro ka iPad Camera Roll wareejiyo computer
Download version saxda ah ee iPad si kala iibsiga computer on your computer sida ay xaaladdaada. Halkan, waxaan qaadi version Windows sida tusaale. Hadda, maraan tutorial ah tallaabo-tallaabo hoos ku qoran.
Tallaabada 1. Calan aad iPad
Si aan ku bilaabo, rakibi iPad si kala iibsiga PC on your computer. Waxa maamula. Tani iPad inay kala iibsiga computer si buuxda u la jaan qaada oo dhan iPads, sida iPad mini iyo iPad bandhigay isha. Isticmaal cable USB ah soo socda aad iPad in ay ku xidhmaan aad iPad kombiyuutarka. Markaas, aad iPad si degdeg ah loo baari doono. Ka dib markii in, dhammaan macluumaadka ku yaal waxaa lagu soo bandhigi doonaa furmo suuqa hoose.
Fiiro gaar ah: Wondershare TunesGo isticmaali interface Lugood. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay si loo soo dajiyo Lugood on your computer hor inta aadan isticmaalin MobileGo.
Tallaabada 2. Transfer Roll Camera iPad in PC
Tiirka tagay, guji "Sawirro" tab. Dhammaan albums on your iPad ayaa la soo bandhigi doonaa guddi saxda ah. Dooro Roll Camera oo guji "Dhoofinta in". Marka uu furmo suuqa file browser u muuqataa, waa in aad qotomisay Jidka dukaan si loo badbaadiyo Roll Camera dhoofiyo. Ka dib markii in, iPad si kala iibsiga PC bilaabaan inay u dhoofiyaan Roll Camera. Xusuusnow in aan barkinta aad iPad inta ay socoto wareejinta.
Ama, ka dib markii meel on your computer, aad si fudud u soo jiidi kartaa jeedi Camera Roll iPad, waxa uu.
Taasi tutorial ah oo ku saabsan sida ay u gudbiyaan Roll Camera ka iPad in computer.
Marka laga reebo dayanayaan iPad Roll Camera in PC, aad awoodaan si ay u gudbiyaan Photo Library on your iPad si aad u computer, iyo qeybsanaan. Haddii aad u badbaadiseen heeso badan oo ku saabsan iPad, aad dhoofin karto dib u maktabadda Lugood music iyo PC iyo sidoo. Saasaan, isku day iPad si kala iibsiga computer in ka badan samayn!